Filtrer les éléments par date : samedi, 05 décembre 2020
samedi, 05 décembre 2020 19:42
Toe-karena sy fihariana : Tsenabe Toam’KETRIKA 2020
Nanomboka ny zoma 04 desambra teto Toamasina ny tsenabe «Toam’KETRIKA ». Ny ONG Saint Gabriel amin'ny alalan’ilay tetik’asa “LA FABRIQUE” no nikarakara an’ity tsena be andiany voalohany ity. Izay mikendry fampahafantarana sy fanosehana ny mpandraharaha tanora sy vehivavy, ka notanterahina ny 04 sy 05 desambra 2020.
Ireo tompon’andraikim-panjakana rehetra nandray anjara tamin’ny kabary fanokafana dia samy nanambara fa zava-dehibe ny fandraisana anjaran’ny tanora sy ny vehivavy amin’ny sehatry ny fihariana mba ho fampandrosoana ny toe-karena.
Ny Goverinora RAFIDISON Richard Théodore dia naka ohatra mikasika ny vokatra letchi izay tsy lanin’ny fanjifàna eto an-toerana sy aondrana any ivelany ka lo fotsiny eny am-potony. Ilaina hoy izy ny hiroboroboan’ny sehatra fanodinana satria maro ireo voka-pambolena sy fiompiana ary asa tanana sy hai-tao.
samedi, 05 décembre 2020 19:40
RN6 : Manjaka ny taingimbe
Toy izao asehon’ny sary izao ny santionan’ny endriky ny fanaovana taingimbe na “surcharge” matetim-pitranga amin’iny lalam-pirenena faha-6 any Antsiranana.
Ny tranga sasantsasany tsikaritra omaly zoma 4 desambra ireo aseho an-tsary ireo.
Rariny loatra, noho izany, raha ahitana taham-pihanahan’ny valan’aretina Covid-19 anisan’ny avo be tampoka teo any amin’iny tendrony avaratr’i Madagasikara iny.
Miezaka mananatra, mitaiza, eny manasazy mihitsy aza ny mpitandro ny filaminana eo anatrehan’ny zava-misy.
samedi, 05 décembre 2020 13:55
Ambohimilemaka – Betafo : Nopaohin’ny rambondanitra ny tafon’ny EPP
Lasan’ny rambondanitra ny alin’ny alakamisy 3 desambra 2020 ny tafon’ny sekoly EPP Ambohimilemaka, ao amin’ny Kaominina ambonivohitra Betafo.
Lehibe ny fahavoazana. Tsy afaka mianatra ny mpianatra, potika avokoa ny boky fampianarana nipetraka tao anaty efitranon-tsekoly.
Mikarakara hetsika fialamboly mandritra ny roa andro ny sabotsy 5 desambra sy alahady 6 desambra 2020 eny Ambohimilemaka ny Kaominina ambonivohitra Betafo, hitadiavam-bola hividianana tafo mba hitohizan’ny fianaran’ny mpianatra, ny andro rahateo efa fahavaratra.
samedi, 05 décembre 2020 13:53
Mandritsara-Betafo : PDS no hitantana ny Kaominina
Banga ny toeran’ny Ben’ny tanàna tao amin’ny Kaominina ambanivohitra Mandritsara, Distrikan’i Betafo, Faritra Vakinankaratra, taorian’ny nahafaty ny Ben’ny tanàna voafidy farany tao, Rakotondranaivo Roger ny 18 jolay 2020.
Nanendry PDS ny fanjakana tamin’ny alalan’ny ministeran’ny Ati-tany. Handray ny asany amin’ny alatsinainy 7 desambra 2020 ny PDS vaovao.
samedi, 05 décembre 2020 13:51
Rolly Mercia : Nolavin’ny Fitsarana fanintelony ny fangatahany fahafahana vonjimaika
Naverina eny Antanimora, nampidirana am-ponja azy vonjimaika hatramin’ny 16 jolay 2020 ny minisitry ny serasera teo aloha Rahajason Harry Laurent, fantatry ny maro amin’ny solon’anarana hoe : Rolly Mercia eo amin’ny sehatry ny asa fanaovan-gazety, rehefa nolavin’ny Fitsarana, fanintelony izao, ny fangatahany fahafahana vonjimaika.
44 volana an-tranomaizina, sazy mihatra no didy navoakan’ny Fitsarana ambaratonga voalohany teto Antananarivo, tamin’ny 15 oktobra 2020 tamin’ireo vesatra nanenjehana an’i Rolly Mercia, toy ny fanohintohinana ny filaminana anatin’ny firenena, rehefa nisy ny fihetsiketsehana an-dalambe nataon’ny andian’olona teny Ankatso, nitaky ny hivoahan’i Berija Ravelomanantsoa ny fonja.
Nampakatra ny raharaha amin’ny Fitsarana ambony ny mpisolovava azy, ary any amin’ny febroary 2021 ny fitsarana.
Tsy misy antony tokony hitazonana am-ponja i Rahajason Harry Laurent, izy rahateo mbola misitraka ny « présomption d’innocence », hoy i Me Rafidison Eric, mpisolovava azy.